Waa maxay qaska: sifooyinka, khatarta iyo talada | Shabakadda Saadaasha Hawada
waa maxay qas
Jarmal Portillo | 15/06/2022 16:09 | Kala bixid
Marka aad ku dhowdahay inaad ku safarto diyaarad, iyada oo aan loo eegin inta ay dheer tahay ama ay gaaban tahay, waxaa mar walba jira shay inna ah oo naga dhigaya wax yar. Haddii duulimaadku dib u dhacay ama la joojiyay, haddii ay ahayd mid kedis ah oo kac ah ama soo degis ah, ama xitaa haddii aan ku dhufano dhowr kuus safarka ah. Diyaaradaha ayaa marka ay si lama filaan ah u dhaqaaqaan waxa ay la kulmaan qalalaase iyo gariir si lama filaan ah, dhaq dhaqaaqyadaan waxaa sababi kara isbadal ku yimaada xawaaraha duulimaadka, jihada hawada loo maro, iyo xaaladaha cimilada oo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ma oga waa maxay qas.
Sababtaas awgeed, waxaanu maqaalkan u hibeeyay inaanu kuu sheegno wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato qaska waxa uu yahay, waxa uu yahay iyo muhiimada uu leeyahay.
1 waa maxay qas
2 Goorma iyo halkee ayay ugu badan yihiin?
3 Noocyada qaska
4 Waa khatar?
5 Talooyin lagula tacaalayo qalalaasaha
Erayga qalalaasuhu waxa uu ka yimid turbulentĭa latin, kaas oo tilmaamaya xaalad qalalaase ( khalkhal ama kacsanaan). Diyaaradda ayaa la odhan karaa waxay la kulmaa qalalaase marka ay si xoog leh u dhaqaaqdo taas oo ay ugu wacan tahay isbeddelka xawaaraha iyo jihada hawadu u socoto. Carqaladuhu waxay yimaaddaan marka qaybaha hawadu khaldamaan, sida caadiga ah qaabka dabaysha. Qalalaasaha waxaa abuuray xaalado cimilo oo kala duwan.
Sababaha ugu badan waa samaynta daruuraha (si sax ah: daruuro si toosan u koraaya), duufaannada, iyo qabyada buuraha ama durdurrada jet. Xiritaanka dabaysha, dhacdo kale oo cimilada ah oo saamaysa duulimaadka, waa isbeddel degdeg ah oo ku yimaada xoogga iyo jihada dabayshu.
Nooc kale oo shil ah oo la heli karo inta lagu jiro duulimaadka waa qaska ay si toos ah u keentay diyaarada lafteedu. Waxay dhacaan marka mug weyn oo hawadu ay ku dhacaan baalasha diyaaradda. Xaalad kasta, duuliyayaashu waxay sameeyaan tijaabooyin iyo dhoolatus si ay u xakameeyaan xaalad kasta oo soo baxda.
Goorma iyo halkee ayay ugu badan yihiin?
Duullimaadyada habeenkii ama duullimaadyada subaxda hore, qalalaasuhu waa dhif inay dhacaan sababtoo ah socodka hawadu wuu fudud yahay waqtiyadan maalintii. Dhanka kale, haddii aan duulno maalintii, waxaa laga yaabaa inaan dareemo dhaqdhaqaaq inta lagu jiro safarka.
Caadi ahaan waxay ku dhacaan meelaha hoose ee safarada gaaban ee caadiga ah, laakiin qaar ka mid ah duullimaadyada fog-fog ayaa ka reeban. Hadii aan ka duulno Hindiya ama Bariga Dhexe, waxaa dhici karta in ay rabshado dhacaan.
Saddex nooc oo qalalaase ayaa si cad loo aqoonsan karaa:
Rabshadaha khafiifka ah: Tani waa dhaqdhaqaaq yar oo aan la saadaalin karin oo diyaaradda ah oo xitaa naga dhigi kara inaan joogsano diyaaradda.
Rabshadaha dhexdhexaadka ah: Tani waa dhaqdhaqaaq la saadaalin karo, ma ogola inaan istaagno diyaaradda waana ku dhici karnaa.
Jahwareer daran: Tani waa midda ugu xun seddexda, diyaaraddu waxay u dhaqaaqi doontaa si aan u dareemeyno inaan ku dhejineyno kursiga, ama "aan ka duuleyno" kursiga.
Qalalaasuhu maaha dhibaato weyn marka ay timaado badbaadada diyaaradaha. Laakin marka la eego waxa aan la garanayn, waa caadi in rakaabka ay dareemaan cabsi iyo xitaa wareer. Waa in aynaan ka baqin qas sababtoo ah diyaaradaha waxaa loogu talagalay in ay u adkeystaan ​​qaska rabshadaha ugu badan. Marka laga soo tago inay si buuxda ugu diyaar garoobeen inay la kulmaan dhibaatooyinkan, duuliyayaashu waxay leeyihiin xirfado ay wax kaga qabtaan qaska. Hoos u dhaca iyo beddelka joogga waa qayb taas ka mid ah.
Inkastoo aysan si buuxda sax ahayn, maadaama dabeecadda aan la saadaalin karin cimiladuna ay isbeddeli karto wakhti kasta, saadaasha iyo dareemayaasha ayaa lagu rakibay qolalka qaarkood si loo ogaado qulqulka iyo xoojinta. Gudaha diyaaradda, waxaa jira arrimo badan ama kayar oo buuqa. Tusaale ahaan, Kuraasta ku yaal bartamaha cuf-jiidadka iyo baalasha diyaaraddu uma badna inay ogaadaan isbeddelladan, halka kuraasida dabada diyaarada ku yaal ay ahaayeen kuwa ugu badan ee lagu arkay. Waa inaan sidoo kale xisaabta ku darnaa in diyaaradda iyo fadhiga weyn, ay yareeyaan qulqulatooyinka aan ogaanno.
Sida aan u isticmaalno suumanka kursiga ee diyaaradda marka aan ku safrayno baabuurka, waa inay sidaas oo kale noqotaa. Xaaladaha godad daran, suunka kursiga waxay badbaadin karaan nolosheena ama waxay ka fogaan karaan nabarrada dhaqdhaqaaqa diyaaradaha. Haddii aad gasho fidsan qalalaase, duuliyuhu wuxuu kaaga digayaa cod-baahiyaha waxa dhacaya iyo waxa loo baahan yahay in la sameeyo.
Talooyin lagula tacaalayo qalalaasaha
Hadii aad ka mid tahay dadka ka baqaya in ay ku safraan diyaarad ama ay ka sii daran tahay qaska, ha werwerin, waxaad aragtay in aanay khatar ahayn oo aad raacdo tabo dhawr ah oo aad si degan ula kulanto. ku raaxayso duulimaad wacan. Waa kuwan qaar ka mid ah tabo fudud oo qof kastaa isticmaali karo si ay kaaga caawiyaan safarka bilaa dhibka.
Aad musqusha ka hor intaadan dhoofin: Taladani aad bay faa'iido u yeelan kartaa haddii aad safar gaaban u baxayso. Tag musqusha ka hor intaanay diyaaraddu kicin si aadan u kacin inta diyaaraddu socoto. Sidan ayaad uga fogaan kartaa dawakhaad jimicsi fudud ama xitaa inaad ku dhegto musqusha inta lagu jiro qulqulka qulqulaya. Haddi ay taasi dhacdo, ku xaji gacanta aad aragto si aad uga fogaato dhac.
Dooro kursiga: Haddii ay suurtagal tahay, dooro kursigaaga. Xaalado badan, daaqadaha ayaa kaa dhigi kara inaad dareento ammaan badan. Haddii aad ka naxayso duulimaadkaaga, iska ilaali meelaha laga baxo ee degdega ah maxaa yeelay neerfayaashaadu waxay carqaladayn karaan daadgureynta suurtagalka ah.
Fahamka qaska: Guud ahaan, waxaan ka baqeynaa wax aan la garanayn, sidaas darteed waxaa lagula talinayaa inaad ogaato waxa qaska ah ka hor inta aanad raacin diyaarad. Waxaad ogaan doontaa inaysan khatar u ahayn sida ay u muuqdaan
Xiro suunka oo kaydi alaabta yaryar: Haddii aad gasho waddooyin qallafsan, xidh suunka kursiga si aad uga fogaato kuuskuus, kufid iyo dawakhaad. Sidoo kale ilaali alaabtaada gaarka ah si aanay u duulin haddii diyaaraddu si lama filaan ah u dhaqaaqdo.
Fuuq-bax, mashquul iyo neefsasho: Ugu dambayn, saddexdan qodob maskaxda ku hay. Inta aad safarka ku jirto, fuuq-bax oo isku day in aad naftaada ku mashquuliso wax qabad (waxaad akhrin kartaa, daawataa filimada oo aad dhegaysan kartaa muusig). Xaaladaha walaaca leh, isku day inaad xakamayso neefsashadaada si aad uga fogaato argagax.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto waxa uu yahay qaska, waxa ay yihiin sifooyinka iyo muhiimada ay leedahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » waa maxay qas